Ireo dingana harahina mba hahamafy orina ny Finoana | Madagascar features website
Friday, August 17, 2012 - 16:25
Read more about Inona no hatao mba hananana “FINOANA”
Ny finoana kristiana dia fahatokiana sy fanantenana ny asan’ Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao izay tanteraka indrindra tao amin’ i Jesosy Kristy.
Tsy takatry ny saina sady tsy azo porofoina amin’ izao anefa io asan’ Andriamanitra mahagaga io.
Ny finoana ihany no hahazoana mandray izany.
Ny finoana no anekena fa marina avokoa ny Teny rehetra nambaran’ Andriamanitra, ny famonjeny, ny Teniny, ny Asany, ary fahavononana ho amin’ ny fankatoavana hatrany ny sitrapon’ Andriamanitra (Rom:1:5).
Ny tsi-finoana kosa dia ny fandavana ny hametraka ny fiainany manontolo amin’ Andriamanitra, na ny fametrahana ny ampahany fotsiny aminy.
Ny finoana no mitarika ny kristiana hatoky an’ Andriamanitra sy hiankina Aminy amin’ ny fiainany manontolo, tsy ny hita maso ankehitriny ihany, fa ny fiainan-ko avy indrindra koa.
Tsy nofinofy fotsiny ihany anefa ny finoana, tsy eritreritra ny amin’ izay zavatra hiseho any an-danitra, fa tena fahatokiana azo antoka an’ Andriamanitra Rain’ i Jesosy Kristy, Tompo Tsitoha, eo akaiky mandrakariva na dia tsy hita maso aza.
Ny finoana ihany no làlana mitondra ny mpino ho any amin’ ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay (Jao:3:36 ; Rom:1:16).
Ny finoana dia fahatokiana velona tsy azo hozongozonina. Fanomezana avy amin’ Andriamanitra izy io (Efe:2:8), vokatry ny asan’ ny Fanahy Masina (1Kr:12:9 , Gal:3:2 ; Efe:1:13).
Ny Fanahy Masina no miasa ao amin’ ny mpino hitarika azy hanana finoana feno fahatokiana.
Na izany aza dia hita fa miovaova ihany ny finoana ao anatin’ ny mpino tsirairay, mety ho malemy, mety ho matanjaka, mety ho faty, mety ho kely, mety ho lehibe (Rom:4:19-21 ; Rom:14:1).
Jesosy Kristy dia nanondro ireo mpianany manao hoe : «Raha avy ny Zanak’ olona, moa hahita finoana ety ambonin’ ny tany va Izy …» (Lio:18:8).
Tokony hiorina amin’ ny finoana isika :
Ny Kristiana miorina amin’ ny finoana dia izay manana finoana lalim-paka, mafy orina, tsy miahanahana, tsy azo hozongozonina, izany hoe : lalim-paka ny fahatokiany ny asam-pamonjena nataon’ Andriamanitra, mafy orina ny fiankinan’ ny fiainany manontolo amin’ Andriamanitra.
Ao amin’ i Jesosy Kristy ihany no fototra iorenan’ ny finoana kristiana sy ny Fiangonana : «Kristy Jesosy no fehizoro indrindra, ary ao Aminy no hirafetan’ ny rafitra rehetra … ao Aminy no miaraka aorina koa ianareo» (Efe:2:19-22).
Koa ny fanamby apetraka amintsika kristiana dia izao : ahoana no hatao mba hahatonga ny kristiana tsirairay hiorina tsara amin’ ny finoana marina ka hahatonga antsika hiaina ny teny hoe : «Ny marina amin’ ny finoana no ho velona» (Rom:1:17b).
Ireo dingana ho fampiorenana ny finoana :
Dingana fito no andeha hojerentsika momba izany :
1. Mangataha finoana amin’ Andriamanitra.
Fanomezana avy amin’ Andriamanitra ny finoana. Koa mba hahazoana miorina tsara amin’ ny finoana dia mila mitombo amin’ ny finoana ny mpino fa tsy ho zazabodo mandrakariva. Mila mangataka amin’ ny Tompo izy, tahaka ny nataon’ ny Apostoly tamin’ i Jesosy Kristy manao hoe : «Tompo ô, ampitomboy ny finoanay» (Lio:17:5).
Matetika no mbola miara-dalana amin’ ny fanahiana sy ny fisalasalana ny finoana eo amin’ ny fiainan’ ny mpino,
tahaka an’ i Petera Apostoly rehefa nasain’ i Jesosy Kristy nandeha tamin’ ny rano (Mat:14:31),
tahaka ny mpianatra manoloana ny fitsanganan’ i Jesosy Kristy tamin’ ny maty (Lio:24:38),
tahaka an’ i Tomasy izay nisalasala mandra-pahitany ny porofo azo tsapain-tanana (Jao:20:24-29).
Mila mivavaka «am-pinoana», mangataka «ny finoana » ny mpino, satria izany no hahazoany miorina amin’ ny finoana (Mat:21:22).
Tsaroantsika ny tenin’ ilay rain-drazazalahy nampahorian’ ny demonia tamin’ i Jesosy Kristy : «Mino aho, vonjeo aho ho afaka amin’ ny tsi-finoako» (Mar:9:24). Mila mangataka izany hatrany ny mpino mba hialan’ ny fisalasalana rehetra ka hananany finoana lalim-paka.
Matoky isika fa homen’ i Jesosy Kristy antsika izay angatahantsika araka ny Teniny manao hoe : «Mangataha dia homena hianareo, mitadiava dia hahita hianareo, dondony dia hovohana hianareo» (Mat:7:7-11; Lio:9:11 ; Jao:14:14).
Nanamafy izany koa ny Apostoly Jakoba hoe : «Nefa aoka hangataka amin’ ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory» (Jak:1:6). Koa «Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ ny finoana ianareo, na tsia» (2Kr:13:5).
2. Mianara ny Tenin’ Andriamanitra, mba hahalalana izay ambaran’ ny Soratra Masina momba ny finoana.
«Ny finoana dia avy amin’ ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ ny tenin’ i Kristy» (Rom:10:17). Tsy afa-misaraka ny finoana sy ny Tenin’ Andriamanitra.
Tsy afaka hiorina amin’ ny finoana ny mpino raha tsy mianatra sy mandalina ny Soratra Masina. Ao amin’ ny Soratra Masina no ahalalana ny asam-pamonjena nataon’ Andriamanitra, ary ny fahalalana izany no mampitombo sy mampiorina ny finoana ao anaty.
Ilaina ny faharetana amin’ ny fianarana sy ny fampianarana ny Soratra Masina (2Tm:3:14).
Mila hararaotina hatrany ny fotoana rehetra ahazoana mianatra ny Tenin’ Andriamanitra, toy ny fianarana Sekoly Alahady, ny fihainoana toriteny, ny fandraisana anjara amin’ ny fampianarana Soratra Masina, ny fahatongavana mivavaka amin’ ny Alahady, ny fanatrehana fiofanana …
Misy koa ireo andinin-tSoratra Masina azo vakina sy dinihina matetika, toy ny Heb:11:1-38 izay milaza ohatra samihafa momba ny finoan’ ireo olona ao amin’ ny Soratra Masina.
Tsy nisy nanana porofo hita maso ireo olona voalaza ao ireo, fa natoky sy nino hatrany ny teny fampanantenana nataon’ Andriamanitra.
Azo isintonana lesona momba ny finoana ireny tantara voarakitra ao amin’ ny Soratra Masina ireny.
3. Maneke ho tarihin’ ny Fanahy Masina.
Efa nolazaintsika teo aloha fa vokatry ny asan’ ny Fanahy Masina ny finoana.
Ny Fanahy Masina no mitarika ny mpino hahalala ny marina rehetra momba ny Soratra Masina (Jao:14:26 ; Jao:15:26).
Tsy hahatakatra izay tena hevitry ny Tenin’ Andriamanitra amin’ izao ny sain’ ny mpino raha tsy misy ny fitarihan’ ny Fanahy Masina.
Omen’ Andriamanitra ho an’ izay rehetra mankato Azy ny Fanahiny (Lio:11:13), araka izay nampanantenain’ i Jesosy Kristy ho an’ ireo mpianany (Jao:16:7 ; Asa:1:8).
Aoka ho feno ny Fanahy ny mpino ary handeha araka ny Fanahy, mba hahatonga azy hiorina amin’ ny finoana marina (Gal:5:25-26 ; 2Tm:1:6-7).
4. Mila iainana ilay finoana.
Ny finoana iainana dia ny fankatoavana sy ny fampiharana eo amin’ ny fiainana andavanandro izay rehetra novakiana sy nodinihana tao amin’ ny Soratra Masina, teo ambany fitarihan’ ny Fanahy Masina.
«Fa aoka ho mpankato ny teny hianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo» (Jak:1:22).
Tsy maintsy miteraka asa sy fankatoavana an’ Andriamanitra sy ny Teniny ny finoana. Hita taratra eo amin’ ny fiainan’ ny mpino ny vokatry ny finoana ao anatiny. «Fa ny voany no hahafantarana azy (ny hazo)». (Mat:7:20).
Ny finoana no manosika ny kristiana tsirairay hiasa. Aseho amin’ ny alalan’ ny asa sy ny fijoroana ho vavolombelona ny finoana. «Fa maty ny tena raha tsy misy ny fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa» (Jak:2:26).
Jesosy Kristy dia nilaza fa tahaka ny olona manorina ny tranony eo ambonin’ ny vatolampy ny olona izay mankato ny Teniny ( Mat:7:24-27).
Tsara orina ny finoany sy ny fiainany, ka na misy aza ny tafio-drivotra sy ny orana mikija dia manana fahatokiana (finoana) an’ Andriamanitra sy ny Teniny hatrany izy .
5. Mahareta amin’ ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra
Ireo dia mety hitranga mba ho fisedrana ny finoan’ ny mpino (ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra), ka ilaina ny faharetana amin’ izany mba hampiorina tsara ny finoana ( Rom:5:1-5 ; Jak:1:2-4 ; Jak:1:12-15).
Jesosy Kristy dia efa nanafatra ireo mpianany ny amin’ ny fitsapana sy ny fizahan-toetra mety hiseho eo amin’ ny fiainan’ izy ireo ( Mat:10:16 ; Mar:13:9-13).
Efa nampitandrina ny kristiana tao Korinto ny Apostoly Paoly : «Koa izay efa manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo» (1Kr:10:12).
Tsy manary ny kristiana ao anatin’ ny fakam-panahy Andriamanitra, ary voalaza aza fa efa manomana mialoha ny lalana rehetra ahazoana mivoaka ho mpandresy amin’ izany Izy (1Kr:10:13).
Ny zavatra rehetra mitranga eo amin’ ny fiainan’ ny mpino ihany koa dia «miara-miasa hahasoa izay tia an’ Andriamanitra» (Rom:8:28). Nandresy ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra rehetra natao taminy i Jesosy Kristy (Mat:4:1-11). Manoatra lavitra noho ny mpandresy koa izay rehetra mino sy matoky Azy.
6. Mijoroa hatrany amin’ ny finoana marina.
Aza manaiky hanao ny «marimaritra iraisana» amin’ ny asan’ ny ratsy.
Tsy misy finoana marina afa-tsy iray ihany (Efe:4:4-6), dia ny finoana an’ i Jesosy Kristy Tompo. Koa dia ilaina ny fijoroana sy ny tsy fivadihana amin’ io finoana marina io.
Ary tsy azo afangaro amin-javatra hafa io toy ny :
fivavahana amin' ny razana,
fivavahana amin' ny fiangonana roa samy hafa (synchrétisme), ...
Ny Soratra Masina mantsy dia mampitandrina ny kristiana ny amin’ ny fisian’ ny mpampianatra sandoka izay te-hitarika azy ireo hiala amin’ ny finoana marina ka hanaraka ny fampianaran-diso samihafa.
Mety hisy tokoa ny voatarika hiala amin’ ny finoana marina vokatr’ izany. Azo lazaina fa tsy mbola miorina tsara amin’ ny finoana ireo kristiana mifindrafindra manaraka fampianarana sy antokom-pivavahana samihafa.
Andraikitry ny Fiangonana ny mampianatra sy mampiorina ny finoana marina (1Tm:6:12 ; Joda:1:3).
7. Mahareta amin’ ny fivavahana.
Efa nisy voaresaka teo amin’ ny dingana voalohany ihany ny momba ny vavaka, fa niompana tamin’ ny resaka finoana fotsiny izany. Fa ilay fiainam-bavaka amin’ ny maha mpino mihitsy no tiana hasongadina eto.
Ny vavaka no hahazoan’ ny mpino mifandray amin’ Andriamanitra, sy ahazoany antoka mandrakariva fa tsy manary azy Izy.
Ny fananana fiainam-bavaka mitohy sy maharitra no ahafahan’ ny mpino miatrika ny toe-javatra rehetra manodidina azy ka hampiorina ny finoany.
«Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka», hoy i Jesosy Kristy (Lio:18:1). Nasehon’ i Jesosy tenany teo amin’ ny fiainany manontolo izany ka nahazoany hery teo am-panatanterahana ny asany.
Ilaina ny fananana ny finoana.
Tsy ampy anefa izany fa mila miorina tsara amin’ ny finoana ny mpino tsirairay, izany hoe : manana finoana lalim-paka sy mari-pototra. Ny fiorenana amin’ ny finoana no manala ny ahiahy sy ny fisalasalana ao anatin’ ny mpino.
Ny olona miorina amin’ ny finoana dia mahalala tsara ny anton’ ny finoany ka afaka miteny hoe : «Fantatro izay inoako» (2Tm:1:12).
Miainga avy amin’ ny finoana kely ao anatintsika izany, izay efa hahavitantsika zavatra goavana (Lio:17:6 ; Mar:9:23), ary ampitomboina miandalana fa tsy sanatria hahena. «Fa isika tsy mba naman’ izay mihemotra ho amin’ ny fahaverezana fa naman’ izay mino ho amin’ ny famonjena ny fanahy» (Heb:10:39).
Koa izao no fampaherezana ho antsika tsirairay : «Miorena tsara, aza miova …» (1Kr:15:58). «mijeré an’ i Jesosy, Tompon’ ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana» (Heb:12:2).